दशैं टीकाको दोस्रो दिन आज पनि टीका थापेर आशीर्वाद लिने क्रम जारी - चारदिशा
October 9, 2019 चारदिशा देश,समाज
काठमाण्डौं – विजयादशमीकाे शुभसाइत मंगलबार नै सकिए पनि टीका लगाउने क्रम आज एकादशीका दिन पनि जारी छ ।
दशैंको टीकाको दोस्रो दिन आज पनि मान्यजनबाट टीका थापेर आशीर्वाद लिने क्रम जारी छ । कतिपय स्थानमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्मै पनि टीका लगाउने चलन छ । कतिपय स्थानमा टीकाको मूल दिन मात्र टीका लगाउने गरिन्छ ।
असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिकाे विजय भएको खुसियालीमा दशैं मनाउने चलन चलेको पौराणिक मान्यता छ । यस्तै, हिन्दु तिथीको ११ औं दिनलाई एकादशी भन्ने गरिन्छ । यो दिन व्रत बस्ने, फलाहार मात्र सेवन गर्ने चलन छ ।
कलाकारहरुको दशैं फोटोमा यस्तो देखियो, धुर्मुसदेखि भुवन के. सी. सम्म (तस्विरसहित)
एक हप्ता लकडाउन थप्ने प्रस्ताव, मन्त्रिपरिषदले आजै…
काठमाण्डौं – कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लम्बिने भएको छ । सरकारले फेरि एक...
काठमाण्डौं – कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि लकडाउन लम्बिने भएको छ ।...